Mbola henjana ny ady
Nivoaka iny izany ny lisitry ny kandida afa-panadinana teo amin’ny dingana voalohany, ka ofisialy ny fahafaha-mandray anjara amin’ny fifidianana ho solombavambahoaka. Mbola manana fe-potoana hahafahana mameno ny fepetra ny hafa na izany aza.
Lasa bizina vaovao
Tongotra mby an-dakana ny fifidianana depiote, ka miandry ny lisitra ofisialin’ireo mpifaninana aloha izany isika mianankavy.
Verezin’ny tao afara
Mainty ny ho avin’i Madagasikara, hoy ilay mpanao politika iray izay. Fehezanteny tsotra sady tsy mahafaly ny maheno izany kanefa toa maha lasa heritreritra ihany hoe fa maninona no mbola tsy ampy 60 andro akory no nitoeran’izao fitondrana izao dia efa izany sahady no
Hanakoako indray ny balarora
Tapitra ny fotoana nahafahana nandrotsaka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana depiote. Didim-pitondrana vaovao no afaka hanalavana an’iny, raha hisy an’izay ho an’izay mety mbola nisalasala.
Ora sisa isaina dia ho tapitra ny fe-potoana hahafaha-mandrotsaka ny antontan-taratasin’ireo kandida ho depiote.
« Ny ratsy atao loza mihantona, ny soa atao ilevenam-bola », hoy ny Ntaolo. “ Izay nafafy no hojijaina ary misy farany ny zava-drehetra”.
Na ny efa zatra ny lalan-dririnina aza, hono, tsy maintsy hisolifatra ihany. Lesona efa hita teto amin’ny firenena sy ny fiarahamonina Malagasy daholo izany rehetra izany saingy izay tokoa angamba no tonga amin’ilay fitenenana hoe “tanana zatra mitsotra ka tsy afaka ny hivokona intsony.”. Ny fomba fanao politika efa hita izay naharatsy azy hatramin’izay ihany no mbola tazana ataon’ny mpanao politika Malagasy ankehitriny. Ny nahagaga aza dia ny maheno sy nahita hoe loza ho antsika ny fomba politika nitranga tao anatin’ny tetezamita farany teo kanefa dia mbola voalaza indray omaly fa tafahoatra noho izay nitranga tamin’ny 9 taona lasa izany no hampiharin’izay eo amin’ny fitondrana ankehitriny. Ilay loza mihantona aterany eo ihany fa ny tena olana dia tsy ireo mpitondra nanao ny hadalany no hibaby azy mialoha fa ilay nofitahany hatrany. Iaraha-mahita io ankehitriny fa miha rendrika tsikelikely ny sambo ary mitsoaka voalohany, hono, ireo … tsy te hiara-ko lavo. Raha ny zava-misy anefa dia mampametra-panontaniana ihany hoe fa mba nanao ahoana re raha bangoina ny fiarahamonina tao an-dapa tao tao anatin’izay 4 taona mahery izay e ? Mba nanao ahoana ny fifandraisana teo amin’ny samy mpanao politika no dia tonga amina sehatra mirefarefa toy izao ny tontolo politika Malagasy ?